Matanda akafumurwa anowedzera hunhu kukicheni yako | Bezzia
Maria vazquez | 17/06/2022 18:00 | Tricks kushongedza
Pane zvinhu zvakaita semaburi akafumurwa izvo vane huvepo hukuru uye kupa chero nzvimbo ine hunhu hukuru. Ikicheni inowanzova imwe yevakasarudzwa uye imwe yevanonyanya kubatsirwa nekuwedzera kwechinhu ichi. Kana zvisiri, tarisa mazano atinogovana newe nhasi.
Zvose matanda nekongiri matanda wedzera hunhu kukicheni. Zvisinei, migumisiro yakawanikwa neimwe uye imwe yakasiyana zvikuru. Nepo matanda ematanda achiwedzera kunaka uye rusticity kunzvimbo, iyo kongiri inotamba neiyo coarse point yeindasitiri.
Ndeapi maitiro aunoda kupa kicheni yako? Iwe unogona kusimbisa iyo maitiro nekubatanidza mapurani ezvivakwa sezvizvi kana, shandisa zvekutanga zvemba senge matanda kuumba kicheni yako uchizvirega iwe uchitungamirwa nezvinhu izvi. Idzi nzira mbiri dzakasiyana dzekuita uye dzose dziri mbiri.
1 Mapango akafumurwa
1.1 Rustic mhepo
1.2 chitsva uye chazvino
1.3 Zvidiki zvidiki
2 Mapango ekongiri akafumurwa
Iyo yakafumurwa matanda ematanda ndiyo inonyanya kufarirwa mukicheni. Uye hazvitishamise, nekuti vanopa izvi kubata kunodziya kunoita kuti imba ino ive yakanaka. Uye ndezvekuti kana kicheni ichiva nzvimbo yetsinga yeimba, apo nguva yakawanda inoshandiswa mairi kupfuura mune vamwe, zvakakosha kuti ive nzvimbo inodziya.
Kudziya hazvirevi nguva dzose rustic, kunyange zvingadaro. matenga emapuranga zvechisikigo zvinobatsira kuwedzera rusticity yekicheni. Kunyanya iyo iyo matanda emapuranga anoratidza kupera kwakaumbwa nekufamba kwenguva.
Kusviba kwehuni uye iyo yakawanda yakakwana, iyo inonyanya kusimbisa iyo rustic style yekicheni. Haasi ese makicheni ane rudzi urwu rwesirin'i, zvisinei, tsvaga kusimbisa chimiro ichi. Iyo yakatwasuka rustic matanda ine yakawedzera yunifomu kupera yakanakira kushongedza yemazuva ano uye avant-garde makicheni.
chitsva uye chazvino
Matanda ane mipendero yakachena uye ari pakati nepakati kana akaiswa padenga chena uye pachinhambwe chakareba kubva kune mumwe nemumwe, vanounza kutsva kukuru kukicheni. Sirin'i inofema uye matanda anoramba achipa kudziya kukicheni asi mune imwe nzira yemazuva ano.
Kana iwe uchitsvaga yemazuva ano, inopenya uye inodziya kicheni, bheja pamhando iyi yematanda uye kugadzirisa. Iwe hauzodi, mukuwedzera, kuti iwo akasimba matanda. Nhasi kune maburi maburi uye zvinhu zvinotevedzera huni nenzira yakabudirira kwazvo inoderedza mutengo,
Kana iwe usingade kuisa matanda padenga asi iwe usingade kusiya iyo mhepo yavanopa mukicheni, vashandise munzvimbo chaidzo sezvakaratidzwa mumufananidzo unotevera. Tinovada sechombo chekushandisa paradzanisa nzvimbo zvinoonekwa: kicheni yeimba yekudyira, imba yekubikira ...
Mapango ekongiri akafumurwa
Mapango ekongiri akawana mukurumbira mumakore gumi apfuura. Kusimuka kwemaitiro emaindasitiri zvakazvifarira uye nhasi kune vazhinji vari mukuvandudza vanonamata kuti vawane danda remhando iyi ravanogona kuchenesa vosiya pamberi. Uye hazvirambike kuti vanowedzera hunhu uye zvakawanda kumba.
Concrete matanda haashandiswe sematanda ematanda uye kunyangwe anogona kugadzirwa kubva kutanga, sechinhu chekushongedza. Havawanzoita mutsetse. Kuchenjerera kunotorwa kuti zviratidzike kuti vagara varipo, kuti varipo nokuti hurongwa hwavo hunodiwa. Saka, chinhu chakajairika ndechekuti vanoyambuka kicheni uye vanozorora pane imwe kana akati wandei makoramu echinhu chimwe chete.
Dzinokwana mukati Maindasitiri makicheni, asi kwete muna izvozvi chete. Sezvauri kuona mumifananidzo, ese makicheni akafumura kongiri matanda ane akasiyana masitaera. Vamwe vane kumwe kurudziro yevintage, vamwe vachibheja pazvinhu zvemhando yepamusoro uye kune zvakare izvo zvinomira kunze kwavo minimalist aesthetic.
Ndeupi rudzi rwedanda raunoda zvakanyanya kudhinda hunhu kukicheni yako? Waizoashandisa sei? Tinovimba kuti mifananidzo yakakurudzira iwe zvakakwana kuti upindure iyi mibvunzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Tricks kushongedza » Matanda akafumurwa anowedzera hunhu kukicheni yako